नेपालबाट दिल्ली जाँदै गरेको बस दु’ र्घटना १७ जनाको मृ’ त्यु – 24updatemedia
काठमाण्डाै भारतको उत्तर प्रदेशमा गए राति भएको दु’ र्घटनामा १७ जनाको ज्या’ न गएको छ । भारतकाे उत्तरप्रदेश राज्यकाे कानपुरमा बस र लोडर ठो’ क्किँदा दु’ र्घटना भएको भारतीय मीडिया ले जनाएको छ ।
अस्पतालमा भेट्न नआएको भन्दै माधव नेपाल प्रधानमन्त्री देउवासँग असन्तुष्ट !
काठमाडौं, १८ असोज । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग रुष्ट बनेका छन् । ६ दिनको अस्पताल बसाईपछि अध्यक्ष नेपाल आज घर फर्किएका छन् ।
अस्पताल बसाईको क्रममा एक दिन पनि प्रधानमन्त्री देउवा आफूलाई भेट्न नआएकोमा उनले गुनासो पोखेको पाईएको छ । उनी अस्पतालमै भएको बेला प्रधानमन्त्री देउवा भेट्न जान लागेको भन्ने समाचार आएका थिए ।
खासगरी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का महासचिव डा. वेदुराम भुषालले पनि प्रधानमन्त्री देउवा अध्यक्ष नेपाललाई भेट्न जान लागेको बताएका थिए । तर, अस्पताल बसाईको क्रममा प्रधानमन्त्री देउवा एक दिन पनि अस्पताल नगएको बरु उनले सरकारको तर्फबाट कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई पठाएका थिए ।
हुन त अध्यक्ष नेपालको सचिवालयले चिकित्सकहरुले नै भेटघाट बन्द गराएको भन्ने प्रतिक्रिया दिएको थियो । त्यही भएर भेटघाट बन्द गरिएको थियो । चिकित्सकहरूले अध्यक्ष नेपाललाई केही दिन घरमै आराम गर्न भनेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष नेपाललाई त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ छाती रोग विशेषज्ञ डा. सन्तकुमार दास नेतृत्वको टोलीले उपचार गरेको थियो ।काठमाण्डाै भारतको उत्तर प्रदेशमा गए राति भएको दु’ र्घटनामा १७ जनाको ज्या’ न गएको छ । भारतकाे उत्तरप्रदेश राज्यकाे कानपुरमा बस र लोडर ठो’ क्किँदा दु’ र्घटना भएको भारतीय मीडिया ले जनाएको छ ।
हुन त अध्यक्ष नेपालको सचिवालयले चिकित्सकहरुले नै भेटघाट बन्द गराएको भन्ने प्रतिक्रिया दिएको थियो । त्यही भएर भेटघाट बन्द गरिएको थियो । चिकित्सकहरूले अध्यक्ष नेपाललाई केही दिन घरमै आराम गर्न भनेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष नेपाललाई त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ छाती रोग विशेषज्ञ डा. सन्तकुमार दास नेतृत्वको टोलीले उपचार गरेको थियो ।
Previous यौ,’न टेप बाहिरिएका मन्त्रीको रवि लामिछानेको सिधा कुरा कार्यक्रममा स्टिङ अपरेसन [ भिडियोसहित ]
Next एमसीसी र बीआरआई चर्चाबीच अमेरिका र चीनका राजदूतले भेटे परराष्ट्रमन्त्री